सनस्क्रीन कपडा निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन सनस्क्रीन कपडा फैक्ट्री
इलेक्ट्रिक सेतो डुअल लेयर रोलर कपड़ा जेब्रा शेड ब्लाइन्ड शेडहरू
चीन रोलर ब्लाइंड कपडाहरू
परिवारका लागि, पर्दा छायाँ गर्न, गोपनीयता सुरक्षित गर्न, तर तिनीहरूको घरहरू सजावट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि धेरै जसो नयाँ पर्दाहरूमा फर्मल्डिहाइड हुन्छ। नयाँ पर्दा घर खरीद गरिए पछि, तिनीहरूलाई हतारमा झुण्ड्याउन सकिदैन। पर्दामा formaldehyde अवशेषहरू कम सुरक्षित गर्न को लागी केहि उपायहरु गर्नु पर्छ। मेथनोल उन्मूलन विधिको व्याख्या गर्न ग्रुप ग्रुप गरौं!
राम्रो क्वालिटी ब्ल्याकआउट जेब्रा विन्डो रोलर ब्लाइन्ड्स र शेड्स पॉलिएस्टर सनस्क्रीन कपडा
UV र वाटरप्रूफ रोलर ब्लाइन्ड कपडा
जेब्रा फेब्रिक डबल-लेयर डिम्मेबल हो, स्थानीय लाइट डिस्लोकेशन समायोजित गर्न सक्दछ र खाली स्थान कब्जा गर्दैन। र full्ग पूर्ण र शुद्ध छ, उच्च-गुणस्तरको कपडाको रंग फलफूल र रमाईलो छ, उच्च र color्ग स्थिरता ग्रेडको साथ र सूर्य प्रतिरोधी छ, फेड गर्न सजिलो छैन।
उच्च-गुणस्तरको कपडाको राम्रो चापल्य छ, र पूरै चौडाईको दिशामा कुनै कप झुकाउने वा लहर छैन।
राम्रो गुण पीवीसी लेपित पॉलिएस्टर इंद्रधनुष पर्दा डबल लेयर ज़ेब्रा ब्लाइन्ड सनशेड कपडा
छायाँ कपडाको विस्तृत प्रयोगको साथ, व्यक्तिसँग छाया पीवीसी लेपित कपडाको लागि व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत मागहरू छन्, जसमध्ये जलरोधक समारोहसहित इन्द्रेणी पर्दा सनशेड कपडा पनि लोकप्रिय छ।
उच्च गुणवत्ता सस्तो मूल्य आगो retardant जेब्रा ब्लाइन्ड्स
जेब्रा ब्लाइन्ड कपडाको कार्यहरू
जब गज र गज ओभरल्याप हुन्छ, प्रकाश अपेक्षाकृत नरम हुन्छ, जसले सीधा प्रकाशलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्छ। जब पर्दा र पर्दा आश्चर्यचकित हुन्छन्, प्रकाश पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन्छ, जसले अन्तमा प्रकाश रोक्नको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। त्यहाँ जेब्रा ब्लाइन्ड्स को धेरै शैलिहरु छन्, र बिभिन्न स्टाइलहरु का पनि बिभिन्न प्रकार्यहरू छन्। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, यी शैलीहरू प्रयोग गरिएको कपडाको आधारमा विभाजित हुन्छन्।
जेब्रा पर्दा कपडाहरू प्राय: पोलिस्टर, हेम्प र नायलन हुन्। कपडाको बिभिन्न छायांकन प्रभावका अनुसार, तिनीहरू अर्ध-शेडिंग जेब्रा पर्दा, लिनेन-जस्तो जेब्रा पर्दा र पूर्ण शेडिंग जेब्रा पर्दामा विभाजन गर्न सकिन्छ। तल्लो बाट उच्चमा छायाँ प्रभाव।
उच्च गुणवत्ता प्रिन्टि But बटरफ्लाय ज्याक्वर्ड सनस्क्रीन जेब्रा रोलर ब्लाइन्ड्स कपडाहरू
एक इनडोर वातावरणमा मान्छे को सुविधाजनकता धेरै कारकहरु संग सम्बन्धित छ, र वरपरको औसत विकिरण तापमान एक महत्वपूर्ण प्यारामिटर हो।
गर्मी मा, प्रत्यक्ष सौर विकिरण गिलास कोठा कोठा मा प्रवेश कोठा को ठोस सतह मा विकिरण को तापमान को कारण जो विन्डो को नजिक उल्लेखनीय वृद्धि गर्न, मान्छे पकाउने को भावना दिन्छ।
जाडोमा, तुलनात्मक रूपमा कम सतह तापक्रमको गिलास विन्डोले चिसो विकिरणको भावना दिन्छ। उही समयमा, विन्डोको नजिक चिसो हावामा डुब्दाको कारण चिसो हावा प्रवाहले विन्डोको नजिकका मानिसहरूलाई चिसो हावामा उडाउने भावना पनि ल्याउँदछ, जसले गम्भीर रूपमा जनताको सुविधालाई कम गर्दछ।
होम डीईसी ब्ल्याकआउट मोटर चालित जेब्रा रोलर शटर शेड विन्डो रोलर ब्लाइन्ड्स कपडा
सनस्क्रीन जेब्रा ब्लाइन्ड कपडाको र्ग मात्र वास्तु सजावट को आवश्यकता पूरा गर्न, तर सूर्य को प्रकाश को प्रतिबिम्बित गर्न पनि ध्यान दिन पर्छ।
(१) यदि यो घर बाहिर लागू गरिएको छ भने, कालो कपडाहरूसँग हल्का र colored्गका कपडाहरू भन्दा सौर्य उज्ज्वल तातो रोक्नको लागि अझ बढी क्षमता छ किनकि उनीहरूलाई कपडाको गाढा र color्गमा ध्यान दिन आवश्यक छैन; यदि घर भित्र प्रयोग गरियो भने, हल्का रंगको कपडाले अझ राम्रो प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछ।
होम डीईसी डबल मोटर चालित जेब्रा रोलर विन्डो ब्लाइन्ड्स शेड कपडा
जब हामी अनौंठो वातावरणमा आउँछौं, हामीलाई आकर्षित गर्ने पहिलो कुरा भनेको सजावट हो। राम्रो सजावटले हामीलाई नयाँ अनुभूति दिन सक्छ। पर्दाको राम्रो चयनको साथ अद्वितीय वालपेपर, अक्सर जीवनमा फरक स्वाद ल्याउन सक्छ। आज हामी तपाइँसँग पर्दा छनौट गर्दा वालपेपर र पर्दासँग मेल खाने आधारभूत सिद्धान्त परिचय गराउँदछौं। हाम्रो जीवनको लागि एक अद्भुत सपना सरप्राइज तयार गरौं।
मोटोराइज्ड ब्लाइन्डहरूले डबल रोलर जेब्रा सौर ब्लाइन्ड शेड कपडा प्रयोग गर्दछ
ब्लाइन्डहरूले रंग समायोजन गर्न र घरको सजावटमा वातावरण सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सजावटमा यसले अधिक र अधिक ध्यान दिन्छ। यद्यपि सजावटसँग सन्तुष्ट हुन यो त्यति सजिलो छैन। त्यसो भए कसरी पर्दा splicing मिलान गर्न?
परम्परागत ठोस र color्गको पर्दाको तुलनामा, चिप्लिएको पर्दा अधिक यौन हुन्। तपाईं समग्र घर सजावट शैली र व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुसार उपयुक्त सामग्री र रंगहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, र नीरस ठाउँलाई सक्रिय पनि बनाउँनुहुनेछ। अब हामी कसरी रंगहरू अझ राम्ररी मिलाउन तपाईंलाई देखाउँनेछौं!
नयाँ डिजाइन ब्ल्याकआउट दिन र रात जेब्रा इंद्रधनुष रोलर ब्लाइन्ड कपडा सजावटको लागि
अर्ध-पारदर्शी कपडा: सामान्य अफिस ठाउँका लागि उपयुक्त, वरपरका राम्रो वातावरणसँग कुराकानी गर्न सक्षम।
रात र दिन डबल ब्लाइन्ड्स सनस्क्रीन जेब्रा ब्लाइन्ड्स कपडा
रोलर ब्लाइन्ड डे-नाइट-जेब्रा शेडहरू
सनस्क्रीन जेब्रा फेब्रिकले मानिसहरुको स्वास्थ्य र बस्ने वातावरणमा प्रभाव पार्छ, भित्री प्रकाशको सघनता र इनडोर वातावरणको आराममा सुधार गर्दछ, यस छाया कपडाले उज्यालो बनाउँदछ जुन कोठामा नरम र आरामदायी हुन्छ, र यसले प्राकृतिक स्वाद पनि सिर्जना गर्दछ, सुन्दरता थप गर्दछ। इनडोर वातावरणको, र व्यक्तिलाई आराम दिन्छ, डबल-लेयर कपडाले प्रकाश समायोजन गर्न सक्दछ। जब पट्टि खोलिन्छ, हामी बाहिरी सुन्दर दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्दछौं। जब अन्धा पट्टि बन्द हुन्छ, यो पूर्ण रूपमा बाहिरबाट अलग छ, गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुहोस्।
आउटडोर मैन्युअल जेब्रा सूर्य स्क्रीन रोलर ब्लाइंड सनस्क्रीन ब्लाइन्ड्स कपडाहरू
जेब्रा ब्लाइन्डहरू नरम धागा पट्टि, इन्द्रेणी ब्लाइन्ड, डिमिमि rol रोलर ब्लाइन्ड, डबल लेयर रोलर ब्लाइन्ड पनि भनिन्छ। एक बुनेको कपडाको सानो टुक्रा बनाएर बनाउने कपडा र गज बराबर चौडाइ एक अर्को छुट्याईन्छ, एक सिरे द्वारा तय गरिएको, र अर्को छेउ शाफ्टको साथ प्रकाश समायोजन गर्न रोल गरिएको छ।
जब गौज र गाउज ओभरल्याप हुन्छ, प्रकाश केही हदसम्म अपेक्षाकृत नरम हुन्छ, सीधा प्रकाश कम गर्नुहोस्। जब कपडा र कपडा आश्चर्यचकित हुन्छन्, प्रकाश पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुन्छ, जसले अन्तमा लाइट ब्लक गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। जब अन्धालाई पूर्ण रूपमा खोल्न आवश्यक हुन्छ, अन्धा पट्टिहरू पूर्ण रूपमा रोल अप गर्न सकिन्छ। जेब्रा ब्लाइन्ड कपडाको गर्मी, रोलर ब्लाइन्ड को सरलता, र अंधा पन्धुको अस्पष्ट समारोह संयोजन गर्दछ। यो अपरेट गर्न सजिलो छ र दृष्टि को क्षेत्रलाई बाधा नपार्न धेरै किसिमका शेडिंगहरू छन्। यो कार्यालय र घर विन्डो सजावट को लागी एक आदर्श विकल्प हो।
आउटडोर प्याटर्नर्ड विन्डोज जेब्रा ब्लाइन्ड रोलर शेड्स जैकवर्ड फैब्रिक
MagicalTex सनस्क्रीन कपडा Win GREENGUARD प्रमाणपत्र र GREENGUARD बच्चाहरु र स्कूलहरु
GREENGUARD मुख्य रूपले इनडोर वायु गुणस्तर मापदण्ड प्रस्तुत गर्दछ, रासायनिक उत्पादनहरूको कम उत्सर्जन मा तेस्रो-पक्ष परीक्षण प्रदान गर्दछ। यसले अधिक स्वस्थ संसाधन उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ र इनडोर वातावरण सुधार गर्दछ। तिनीहरू संदर्भ मानक र LEED ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणालीको लागि बोनस सामग्री हुन्। GREENGUARD वातावरणीय संस्थान, अमेरिकी राष्ट्रिय मानक संस्थान (एएनएसआई) द्वारा एक स्वीकृत र अधिकृत मानक-स्थापना संस्थान को रूप मा निर्माण सामग्री, सजावट सामग्री, फर्नीचर, फर्श सामग्री, सतह सामग्री, रंग र कोटिंग्स सहित सबै इनडोर उत्पादनहरु को लागी एक कडा उत्पादन अस्थिर मानक स्थापना। , सफाई एजेन्ट र अन्य बच्चाहरूको उत्पादनहरू २० भन्दा बढी कोटीहरूमा।